वृद्धवृद्धा र हाम्रो दायित्व- विचार - कान्तिपुर समाचार
वृद्धवृद्धा र हाम्रो दायित्व
वृद्धवृद्धा हाम्रो समाजका आस्थाका धरोहर, जिउँदा इतिहास, हामीलाई सत्मार्गमा लगाउने पथप्रदर्शक, हाम्रो सपनाका कालिगड हुन् ।
कार्तिक १९, २०७७ कल्पना भण्डारी
जन्मदिवसको कार्डमा लेखिएको सन्देशविपरीत बुढ्यौली चालीस वा पैंसट्ठी वर्षमा सुरु हुँदैन । हुन त हामी बुढ्यौलीसम्बन्धी परिवर्तनहरूलाई जीवनको सुरुका अवस्थाहरूमा ध्यान दिँदैनौं तर जन्मेकै घडीदेखि बूढो हुन थाल्छौं ।
सामान्यतया बुढ्यौलीले व्यक्तिको जीवन अवधिमा हुने जैविक परिवर्तनलाई सम्बोधन गर्छ जुन सकारात्मक वा नकारात्मक वा तटस्थ हुन सक्छ । मानिसको बाल्यकालले विकास र परिपक्व हुने अवधिलाई देखाउँछ । कुनै व्यक्तिले यो उमेरमा शारीरिक र सामाजिक स्तरमा विकास एवं परिपक्वता हासिल गर्छ । मानिसमा तीस वर्षको उमेरपछि केही शारीरिक अंगहरूमा घट्दा परिवर्तनहरू देखा पर्छन्, जसलाई सिनेसन भनिन्छ । सिनेसन बिस्तारै शरीरभरि हुन थाल्छ । अन्ततोगत्वा यसले शरीरको कार्यशक्ति घटाइदिन्छ र अंगहरूको संवेदनशील अवस्थालाई रोगमा परिणत गरिदिन्छ । यही जीव विकासको अन्तिम अवस्था हो (इन्टरनेसनल लङ्ज्याभिटी सेन्टर, सन् १९९९) ।
सिनेसन श्रव्य, दृश्य तथा दैनिक क्रियाकलापमा देखिएको परिवर्तनबाट अनुभव हुन्छ । मानिसले आफ्नो शरीरमा कुनै महत्त्वपूर्ण प्रभावबेगर नै केही मात्रामा शरीरबाट केही गुमाएको वा कमजोर भएको अनुभव गर्छ । त्यो अनुभूति नै बुढ्यौली सुरु भएको संकेत हो । यो संकेत जैविक सिद्धान्तअनुसार सामान्यतया तीस वर्षपछि हुन सक्छ तर हरेक व्यक्तिमा यो अत्यन्तै फरक ढंगले लागू हुने भएकाले बुढ्यौली तीस, चालीस वा पचासभन्दा धेरै वर्षपछि पनि सुरु हुन सक्छ । गर्भावस्थादेखि जन्मपछि वातावरणीय अन्तरक्रियासँगै पोषणले शरीरको अवस्थालाई निर्धारण गरेको हुन्छ । सामान्यतया विकसित देशहरूमा पोषणको अवस्था राम्रो हुने भएकाले पैंसट्ठी वर्षभन्दा माथिको उमेरलाई बूढोपन वा आश्रित उमेर सुरु हुने र पचासीभन्दा माथिको उमेरलाई बुढ्यौली भन्ने गरिन्छ । नेपालको परिप्रेक्ष्यमा साठी वा सोभन्दा माथिको उमेर समूहलाई आश्रित वा वृद्धवृद्धाको जनसंख्या भनिन्छ ।
वृद्धवृद्धा हाम्रो समाजका आस्थाका धरोहर, जिउँदा इतिहास, हामीलाई सन्मार्गमा लगाउने पथप्रदर्शक, हाम्रो सपनाका कालिगड हुन् । वृद्धवृद्धाको संगत गरी बुद्धि प्राप्त गर्नुपर्छ भनी कौटिल्यको अर्थशास्त्रमा उल्लेख छ । यसरी जस्ता र जति उपमा दिए पनि हाम्रो समाजले वृद्धवृद्धाको उपेक्षा त गरिरहेको छैन ? मननयोग्य छ यो विषय । विकसित मुलुकहरूमा वृद्धवृद्धाको अवस्था सुरक्षित र संरक्षित हुन्छ । पालनपोषण र स्वास्थ्योपचारको दायित्व राष्ट्रको काँधमा हुने हुँदा बुढेसकालमा के गर्ने भन्ने चिन्ताले उनीहरूलाई छुँदैन । हाम्रो देशको अवस्था भने फरक छ । हाम्रो समाजमा प्रायः अभिभावकहरू जब पाका हुँदै जान्छन्, उनीहरू आफ्नै परिवार र सन्तानहरूबाट उपेक्षित र तिरस्कृत हुन्छन्, आफैंले जन्मएका सन्तानका आँखाको कसिंगर बन्दै जान्छन् ।
नेपालमा हालसम्म पनि आफ्नो चल–अचल सम्पत्ति सन्तानहरूबीच भागबन्डा गरिदिने चलन छ । यसरी सम्पत्ति अंश लगाउने बेला अभिभावकको पालनपोषणको कुरा पनि आउँछ । बाबुआमा कोसँग बस्ने वा कसले पाल्ने ? निर्णयको अधिकार अभिभावकहरूमै हुन्छ । अभिभावकहरूले सम्पत्ति प्रशस्त जोडेका भए पाल्न सबै सन्तान लालायित हुन्छन्, तर अलि विपन्नै भए सो कर्तव्यबाट सकभर पन्छिन खोज्छन् । यही विषयबाट सन्तानहरूबीच मनमुटाव र वैमनस्य पनि बढ्न जान्छ । जुन अभिभावकहरूले जन्माई, हुर्काई, दुःख–पीडा सहेर सक्षम बनाउन कुनै कसर बाँकी राखेका हुँदैनन्, तिनैलाई सन्तानले तुलोमा राखेर तौलिनु कति उपयुक्त होला ? मैले धेरै बुबाआमा, हजुरबा, हजुरआमा साथै अन्य वृद्धवृद्धा तिरस्कृत र अपहेलित भएको देखेकी छु । समाजका अगाडि आफू शिक्षित र सभ्य हुँ भन्दै छाती फुलाउने सन्तानहरूमध्ये कतिले गाला चाउरी परिसकेका अभिभावकहरूलाई रूखो व्यवहार गरिरहेका हुन्छन् ।
डाँडामाथिको घाम बनेका वृद्धवृद्धासँग हामी किन सम्मानजनक व्यवहार गर्न सक्दैनौं ? बाँचुन्जेल एक गाँस राम्ररी खुवाउन र एक वचन राम्रो बोल्न किन कन्जुस्याइँ गर्छौं ? हामी आफ्ना अभिभावकलाई जस्तो व्यवहार गर्छौं, त्यस्तै पाठ हाम्रा सन्तानहरूले सिकिरहेका हुन्छन् र भोलि हामीले पनि त्यही आचरणको सामना गर्नुपर्ने हुन्छ भन्नेपट्टि हाम्रो सोच किन पुग्न सक्दैन ? छोराबुहारी, छोरीज्वाइँ, नातिनातिना, पनाति–पनातिना, दाजुभाइ, भदा–भदै, आफन्तहरू र समाजबाट तिरस्कृत, अपमानित र उपेक्षित भएका धेरै वृद्धवृद्धा यही समाजमा आँसु बगाउँदै काल पर्खिन बाध्य भइरहेका छन् । ‘घरले जाजा, वनले आइज–आइज’ भन्ने बेला परिवारबाट उपेक्षित हुनु हृदयविदारक हुन्छ ।
जुन अभिभावकहरू सन्तानका लागि दस नङ्ग्रा खियाउँदा–खियाउँदै आफ्ना लागि केही गर्न सक्दैनन्, तिनको सहारा हुन प्रायः सन्तान तयार हुँदैनन् । ‘न सम्पत्ति छ न कमाइ, यस्ता बूढाबूढीलाई कसले पाल्छ’ भनेर आफ्नो कर्तव्यबाट पन्छिन्छन् सन्तानहरू । कसैले भने बाबुआमाको सम्पत्ति नपाउन्जेल माया र आदरको नाटक गर्ने अनि सम्पत्ति हात परेपछि तिनलाई पाटीमा पुर्‍याउने गर्छन् । कोही भने आफ्ना बच्चाहरू ससाना हुन्जेल वृद्ध अभिभावकहरूसँग बस्ने अनि जब बच्चाहरू हुर्कन्छन्, कि आफू छुट्टिएर बस्ने नत्र अभिभावकहरूलाई नै घरबाट निकालिदिने गर्छन् ।
यस्ता कुरामा बुहारी मात्र हैन, छोराहरू पनि होमा हो मिलाउँछन् अनि आफ्नै आमाबुबालाई पराई र शत्रु देख्न थाल्छन् । अभिभावक मानौं ‘दुहुनु गाई’ हुन्, दूध दिउन्जेल ठीक, त्यसपछि घाँडो ! वृद्ध भत्ता आफूलाई नदिएको निहुँमा कति सन्तानहरूले आमाबुबालाई घरबाट निकालिदिएका छन् । कतिले यी बूढाबूढी कहिले मर्लान् अनि आनन्दको सास फेरौंला भनेर दिन पर्खेर बसेका हुन्छन् । कतिपय वृद्धवृद्धाले टाउको दुख्दा न एउटा सिटामोल पाएका हुन्छन् न त सुत्नका लागि तातो ओछ्यान नै । आफूसँग हुँदै नहुनेले त भएन, के दिऊँ भन्नु ठीकै हो, तर पुगीसरि हुनेहरूले पनि यी कुराबाट वञ्चित गराएका हुन्छन् आफ्ना अभिभावकलाई ।
अभिभावकलाई जिउँदो हुन्जेल आङ ढाक्ने एकसरो कपडा नदिने, मन लागेका खानेकुरा नदिने, जान चाहेको ठाउँमा नपुर्‍याइदिने, अपमान र तिरस्कार गर्ने अनि मरिसकेपछि दुःख बोकेको छु भन्दै सेतो पहिरन लगाएर श्राद्धमा पिण्ड चढाउनु, पितृ प्रसाद भनेर मान्छेलाई बोलाएर खुवाउनु, ब्रह्माण्ड दान गर्नु र पितृको नाममा भन्दै धार्मिक स्थल डुलेर धर्म प्राप्त गर्न खोज्नु कसरी युक्तिसंगत हुन्छ ? तपाईं–हामी अपवाद हुने हो कि ? आआफ्ना घरका वृद्धवृद्धाहरूलाई सम्मानजनक व्यवहार गर्न थालिहाल्ने हो कि ?
प्रकाशित : कार्तिक १९, २०७७ ०८:०९
विहारमा दोस्रो चरणको चुनाव, ९४ प्रतिस्पर्धी
कार्तिक १९, २०७७ एजेन्सी
पटना — भारतको विहार राज्यमा मंगलबार दोस्रो चरणको मतदान सम्पन्न भएको छ । विधानसभाका ९४ सदस्यका लागि १७ जिल्लामा भएको मतदान शान्तिपूर्ण रूपमा सकिएको अधिकारीहरूले जनाएका छन् ।
यसअघि अक्टोबर २८ मा पहिलो चरणको निर्वाचन सम्पन्न भइसकेको छ । पहिलो चरणको मतदानबाट ७१ सदस्य चयन हुनेछन् ।
दोस्रो चरणको निर्वाचनका लागि २ करोड ८६ लाख जना मतदाता रहेका थिए । निर्वाचन आयोगका अनुसार तीन चरणका निर्वाचनमध्ये सबैभन्दा धेरै मतदाता दोस्रो चरणमा रहेका थिए ।
मंगलबार भएको मतदानमा १ हजार ४ सय ६४ जना उम्मेदवार प्रतिस्पर्धामा छन् । तीमध्ये भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) बाट ४६, जनता दल युनाइटेडबाट ४३ जना, राष्ट्रिय जनता दल (आरजेडी) बाट ५६ जना र कंग्रेसबाट २४ जना उम्मेदवार रहेका छन् । आयोगका अनुसार अन्य उम्मेदवारहरू साना दलमार्फत तथा स्वतन्त्र रूपमा चुनावी मैदानमा उत्रेका हुन् ।
निर्वाचनमा सहभागी उम्मेदवारमध्ये पूर्वमुख्यमन्त्री लालुप्रसाद यादवका छोरा तेजस्वी यादव र तेज प्रतापको उम्मेदवारी बढी चर्चामा छन् । तेजस्वीलाई महागठबन्धनका तर्फबाट मुख्यमन्त्रीको उम्मेदवारका रूपमा हेरिएकाले पनि बढी चर्चा भएको हो । उनी रंगपुरबाट उम्मेदवार बनेका हुन् ।
प्रकाशित : कार्तिक १९, २०७७ ०८:०३